Mpanamboatra vokatra be mpamatsy - Mpamatsy vokatra China
Agent manazava labiera
Sakafo ambaratonga agar
Ny vovo-jelly dia vita amin'ny carrageenan, siligaoma konjac, glucose ary akora sakafo hafa, vahaolana mivantana amin'ny fanaovana jelly izany. Amin'ny alàlan'ny fampiasana carrageenan ampifangaroina amina akora hafa, ny vovo-jelly dia mety hanana toetran'ny fifangaroana, fihazonana rano ary mahatonga ny jelly ho malemy kokoa. Ny vovo-dronono dia karazana fibre amin'ny sakafo avo lenta miaraka amina semi-fibre mahavelona rano, izay nekena ny fikarakarana ara-pahasalamana an-trano sy any ivelany. Afaka mandroaka atom-by mahery sy radioaktifa i ...
Matetika ny vovoka vatomamy malefaka dia gel mitambatra, mitovy amin'ny fampiasana akora sakafo amin'ny jelly, ny vovo-vatomamy vita amin'ny agar dia manana tanjaka gel lehibe. Azo atao ny manamboatra vatomamy malefaka miaraka amin'ny gelatinization mahery, mangarahara avo, mazava kristaly, elastika mahery vaika ary tsiro marefo amin'ny alàlan'ny fampifangaroana agar-agar, carrageenan ary akora hafa. , mangarahara tsara, vola kely azo ampiana, vidiny ambany, adjusta ...
Beer Clarifying Agent dia nalaina avy amin'ny ahidrano an-dranomasina ambony kalitao. Amin'ny maha vokatra maitso voajanahary azy, ny fiarovana azy dia neken'ny Firenena Mikambana momba ny fambolena sakafo. Ny fahombiazan'ny mpandraharaha manazava ny wort dia ny mandray ny proteinina amin'ny wort, manala ny azota azo ovaina, manazava ny labiera ary manemotra ny andro fisian'ny labiera. Ny mpanazava labiera dia manana karazany roa: granula sy vovoka. Izy io dia manana ny mampiavaka ny fampiasana tsotra, ny vidiny mora ary ny vokany miharihary, ary afaka manatsara ny ...